FANOLANANA MISESISESY : « Aoka izay ny fahanginana, sahia mitory », hoy i Mialy Rajoelina – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:44
Nanentana ireo olona niharan’ny herisetra hahasahy hitoroka ny vadin’ny Filoha.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FANOLANANA MISESISESY : « Aoka izay ny fahanginana, sahia mitory », hoy i Mialy Rajoelina
Manoloana ny firongatry ny fanararaotana ara-nofo miseholany mianjady amin’ny ankizy nandritra ny herinandro mahery. Nivoaka tamin’ny fahanginany, omaly, ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika, Mialy Rajoelina manoloana ireo tranga niseho. Hentitra izy, tamin’ny fanambarany ary manameloka tanteraka ny herisetra ara-nofo atao amin’ny ankizy….
Rado Harivelo 10 novembre 2020
« Melohiko tanteraka ny fanararaotana ara-nofo atao amin’ny ankizy amin’ireo zaza tsy ampy taona, mbola tsy mahatsiaro saina akory, tsy manan-tsiny, na manana fahasembanana. Amin’ny maha vehivavy ahy, tena vaky ny foko. Amin’ny maha-Reny ahy, tena tezitra mafy aho, ary miombona alahelo tanteraka sy miara-miory amin’ny fianakaviana izay namoy zanaka. Tsy zakan’ny saiko mihitsy ny mahita ny sary sy horonantsary amin’ireny tranga tato ho ato ireny, izay niafara tamin’ny fahafatesana mihitsy », hoy ny fanambaran’ny vadin’ny Filoha, Mialy Rajoelina, omaly tao amin’ny tambajotra ara-tsosialy « Facebook » ny Fikambanana Fitia. Mba hisorohana izany, hoy izy, dia manentana ireo iharan’ny herisetra sy ireo fianakaviany, mba tsy hisalasala hanatona eny amin’ny Ivon-toerana miady amin’ny herisetra eny Mahamasina, tsy hangina fa hahasahy hitory. Tsy misy atahorana na mampiahiahy fa ao anatin’ny tsiambaratelo tanteraka ary maimaimpoana avokoa ny fandraisana an-tanana rehetra ao.
Matetika mantsy, ny Raikely mihitsy, na havana akaiky na mpifanolo-bodirindrina no manolana, manararaotra ny fahalemen’ilay zaza. Ny zava-misy ary tena olana lehibe, dia ny fifandraisana sy rohim-pihavanana eo amin’ilay mpanao herisetra mamoafady sy ny hiharan’izany ka mahatonga ny fahanginana. Tsarovy anefa fa ny fanolanana, dia mahatonga ny vohoka tsy niriana, mamotika ny taova manontolo, ary mamela takaitra mandrakizay eo amin’ny fiainan’ny olona, izay hiharan’izany, ary mety mitarika hatramin’ny fahafatesana.
Ivon-toerana mandray an-tanana
Nentaniny manokana ireo, izay misedra herisetra, manana zo ho arovana ianao, manana zo hahazo fandraisana an-tanana, manana zo tsy hanaiky izany. « Tsy noho ny hadisoanao velively no mahatonga anao hisedra ny herisetra fa ilay mpanao toetra mamohehatra no diso tanteraka ary tena meloka eo anatrehan’ny lalàna. Ireo mpanao herisetra no mendrika ny sazy faran’izay henjana indrindra », raha ny fanambarany. Tsy miolaka izy nanambara fa tsy hanaratsy endrika na hitsaran’ny olona anao mitoroka ny fahatongavana ao amin’io ivon-toerana miady amin’ny herisetra. Misy ivon-toerana hafa koa, izay afaka mandray an-tanana, ireo iharan’ny herisetra, toy ireo “Centres d’écoute et de conseils juridiques” na CECJ manerana ny Nosy, na ireo « Centre VONJY », na eny amin’ny “Police des moeurs et de la protection des mineurs” PMPM, ny BFP sy ny Zandarimariam-pirenena.
Ho an’ny ivon-toerana miady amin’ny herisetra etsy Mahamasina, herintaona lasa tokoa no najoro, natao hiarovana ireo ianjadian’ny herisetra eny anivon’ny fiarahamonina samihafa. Ity ivon-toerana ity dia mandray am-pitiavana, mihaino ary manampy amin’ny torohevitra sy fanohanana ara-psikolojika, ny fanohanana ara-medikaly ireo rehetra manana olana eny amin’ny fiarahamonina amin’ny resaka herisetra ary ao anatin’izany ny fanolanana. Misy Mpisolovava hanoro hevitra araka ny lalàna mandray ao amin’ny ivon-toerana. Tiana ny manamarika fa efa mipetraka ny Fitsarana manokana miady amin’ny herisetra na ny “chaine pénale anti-violences basées sur le genre”. Eo koa ny “Brigade féminine de proximité” avy ao amin’ny Polisim-pirenena mihaino sy manampy amin’ny fitoriana sy ny fanadihadiana raha ilaina. Misy mpitsabo sy « psychologue » koa handray an-tanana avy hatrany izay tonga ao. Misy koa ny fiofanana omen’ny ivon-toerana ireo vehivavy na lehilahy niharan’ny herisetra, mba hanampiana azy ireo hiverina tsikelikely eny anivon’ny fiarahamonina sy ahafahany manana asa fivelomana.
Nisesisesy ireo niharan’ny fanolanana…
Tato ho ato, hita sy tsapa fa nihaniakatra ny tahan’ny fanolanana natao tamin’ny ankizy tsy manan-tsiny. Anisan’izany, ohatra, ny nanjo an’i Suzy 16 taona tao Ankadivoribe Atsimo, ireo telo vavy niharan’ny fanolanana, ilay tovovavy tany Moramanga, ilay zazavavikely 12 taona tany Mahavatse Toliara, ilay zazavavikely 12 taona tany Fandriana, zaza 5 taona tany Ivato, ilay tovovavy 16 taona tao Antsirabe, ilay tovovavy 15 taona tao Toamasina, ilay zazavavy 7 taona tao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany, ilay zazavavy 11 taona tany Mandoto. Teo koa i Tiphania 7 taona sy ilay zazalahy 14 taona teny Alakamisy Ambohidratrimo, izay samy nodimandry, sy ireo maro hafa tsy ho voatanisa.